I can't connect network with hub — MYSTERY ZILLION
I can't connect network with hub
November 2008 edited January 2009 in Networking
I using window network setup wizard for home and small office connected by workgroup.
When I see my workgroup I cannot see any computer. Another computer also the same.
I have firewall ESET. Is that problem.
In the network properties, Is there anything to install like Service or something?
Please help my problem, thank you in advance.
What Myanmar font are you using? I can't read your title.
Ko_Pyae wrote: »
Network adapters နဲ့ cables တွေကို သေချာတပ်ပါအုံး။
Local Area Connection Properties က Internet Protocol (TCP/IP) setting ကိုလဲ သေချာဂရုတစိုက် set up လုပ်ပေးဖို့လိုမယ်ထင်တယ်။
Network setup တော့လုပ်တယ် Shared တော့ မလုပ်ထားဘူးဆိုရင် pc တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာ မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ် share လုပ်မယ့် Drive ဒါမှမဟုတ် Folders ကို Shared လုပ်ပေးရမယ်။ ဘယ်နှစ်ယောက်ကို access လုပ်ဖို့ allow မယ်ကအစပေါ့။
လိုအပ်ရင် drive mapping ပါလုပ်ပေးရမယ်ထင်တယ်။
အလွယ်ဆုံးနည်း eset firewall ကို disable ပေးလိုက် ဟီး:D
user အနေနဲ့သုံးတာလား admin အနေနဲ့သုံးတာလား
သူများစက်ကို ping ကြည့်ပါလား ရမရ မရဘူးဆို ကို စက်က Ncard, cable, or soft
ှုIn the network properties, Is there anything to install like Service or something?
Network driver uninstall လုပ်ပြီးမှာ ပြန်ပြီး install ပြန်လုပ်ပါလား
ဒီက ညီအကို firewall အွန်ထားရင် မတွေရပါဘူး ... share ဖိုဒါတွေကို မြန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
မိုက်ကရိုဆောလ့်ရဲ့ Port နံပါတ်တွေကို on ကပါမယ်... ဥပမာ ... 135 ကနေပြီး 139 ထိလားမသိဘူး အဲဒါ on ပေးမှ တက်မယ်ဗျ... နိုမိုဆိုရင် တွေကမှာမဟုတ်ဘူး ...... netbios ရဲ့ port တွေထင်တယ် အဲဒါ ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ
netstat -an ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက် ...
C:\_Documents and Settings\_Server>netstat -an
Listening ဆိုတဲ့ လိုင်းတွေမှာ အခုလို ဂဏန်းတွေ ပေါ်မနေဘူးဆိုရင် တင်ထားတဲ့ antivirus ကို ခဏ ပြန်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်။
ပြီးရင် အင်တာနက်၀င်ကြည့်။ နက်၀ါ့(ခ်)ထဲ၀င်ကြည့်။ အကုန်အိုကေပြီိဆိုရင်တော့... antivurus ကို သတိထားပြီးပြန်တင်ကြည့်။ သူကမေးတိုင်း စွတ် ok မလုပ်နဲ့။
ကို tweety ပြောတာ ဖြစ်နိုင်တယ်
local ဆိုရင် အဲဒါပွင့်လားအရင်ကြည့်ပါ.။။။။
ဒီကိတ်စကလွယ်ပါတယ်၊ ဟိုလိုဒီလိုတွေ လုပ်နေဖို့မလိုပါဘူး။
ကွန်ပျူတာ နက်၀ပ်ကြိုးတွေ switch မှာ တတ်လိုက်၊(၂)လုံးစလုံး။
switch port တွေမှာမီးလင်းလားကြည့်၊
port ၇ မှာတပ်ရင် ၇ မှာမီးလင်းရမယ်၊
မီးလေးတွေလင်းနေရင် my networkplace ကိုသွား right click properties ကိုသွား
Network icon ကို right click properties ကိုသွား
Internet Protocol tcp/ip ကိုသွား click properties ကိုသွား Use the following IP address
ကို click type like that
do it same as like above to another computer and only
change in IP is
restart both computers and they will find in network neighbour hood.
My network contain 15 computers. their connection is good while the electricity is stable. but it is not stable like stop connection foramoment, and display pop up menu of"network cable unplugged" when the electricity is unstable. Could u solve it? it is not bigaproblem for internet but it isabig pb for playing network game such as "warcraft", "counterstrike". Who can solve it? Pls Help me!
tinthanoo wrote: »
အဲလာက အစကတည်းက နက်၀က်ချိတ်လို့ရတာလား
ချိတ်နေရင်းနဲ့ ပြုတ်ကျတာလား :39:
ဂိမ်းထဲက နက်၀က် setting ကို လည်း ပြန်စစ်လိုက်ပါ..
ပြုတ်ကျတာဆိုရင်တော့ switch ကို restart ပြန်ချ PC ကိုလည်း ပြန်ချလိုက်ပါ:67:
မီးငြိမ့်ရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော် မဖြစ်ချင် စတေဘယ်လိုက်ဇာဆိုတာရှိတယ် ၀ယ်တပ်လိုက် ငြိမ်လိုုက်တာမှ ရှယ်ပဲ သိန်း၂၀ ပတ်၀န်းကျင်တော့ကုန်မယ်:d